Baroow qulqulaya | October 2019
Ugu Weyn Ee Baroow qulqulaya
Noocyada qulqulaya qadhaadh ee sii kordhaya: doorashada xulashada beeraha, beeritaanka iyo daryeelka
Willow wuxuu leeyahay noocyo badan, oo ay ku jiraan xayawaan, geedo iyo noocyo duq ah. Waxay si fiican u koraan, waxay si fiican ula qabsadaan xaaladaha magaalooyinka waxayna sahlan yihiin inay xoqdo. Guryaha qurxinta ee dhirta kuwan waxay ka dhigaan kuwa ugu cadcad ee naqshadeeyayaasha muuqaalka. Kuwa ugu caansan waa cirbigii ooh, taas oo maqaalkani u go'an yahay.
Cannaanka cad: sifooyinka iyo sifooyinka
Tijaabooyin macdan ah oo loogu talagalay geedka digaagga, wax lagu karsado gacmahaaga, isku dardar diyaar ah
Noocyo daryeel oo loogu talagalay cunnooyinka cunnada ah ee cunta ee Mexico - "Astrophytum"
Xeerarka loogu talagalay kor uqaadida chicks. Chicks quudinta ilaa bil iyo ka dib
Lily waa mid ka mid ah ubaxyada ugu caansan. Taariikhda sumcaddeeda waxaa loo xisaabiyaa sanado, laakiin qarniyo iyo xitaa millennia. Ubax waxaa lagu sheegay dhowr jeer Kitaabka Qudduuska ah, waxaa laga helayaa qoraal gacmeedyadii hore. Iyo frescoes da'da ugu weyn waxaad arki kartaa muuqaalkiisa. Dabeecadda, waxaa jira ilaa 80 nooc oo ubaxyo. Read More
Sida loo koro strawberries ee lagu koriyo ah
Cunto kulul "Zephyranthes" (Upstart): sharaxaadda, daryeelka guriga iyo sawirrada
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Baroow qulqulaya 2019